Simba remagetsi pasina kukanganiswa neWavestar | Green Renewables
Simba remafungu pasina kukanganiswa neWaveStar
Daniel Palomino | | Wave Simba, Nyowani matekinoroji
WaveStar chirongwa chinopa wave simba, ndiko kuti, simba rinogadzirwa nekufamba kwemasaisai (kana iwe uchida kuwana rumwe ruzivo nezverudzi urwu rwesimba raungaona "Misiyano pakati pemafungu uye simba remhepo") isina kumiswa.
Iwe unoziva nezve chero nyaya yekuti mumwe munhu kunze kwekambani ane zano rakajeka uye akasara asina kana chinhu nekuda kwekushomeka kwezviwanikwa kana mune yakanakisa kambani inotenga iyo pfungwa?
Zvakanaka izvi ndizvo zvakaitika, vakoma vaviri vanoda kufamba nechikepe vakasimbirira kutora mukana we "masimba ane simba ari pasi pegungwa" sezvavanotaura uye yakapa WaveStar.
Ichi chiitiko chekupayona Iyo inokwanisa kugadzira simba remasaisai pasina kukanganiswa. Uye zvakare, chikamu chekubatsira ndechekuti inozviita nayo kuramba ndisati ndamboona nhamo dzemamiriro ekunze iyo, shure kwezvose, iri rimwe rematambudziko makuru akatarisana nekuwana uye kushandisa iri simba rinowedzerwazve.
2 Kune ramangwana
Hama dzaHensen (Niels naKeld Hensen) vaive nechavo, iro zano rakajeka iro, mushure memakore gumi ekutsvagisa, WaveStar yakazvarwa, ichipindura kunetso yekugara ichichinjisa simba rekutora simba rinoitika rimwe nerimwe 5 uye 10 masekondi emafungu.
Izvi zvinoitwa nekuda kwehurongwa hwe mutsara akanyudzwa maburu izvo zvinokwira nekudzika zvichichinjana, zvichiita kuti zvive nyore kune iyo kuwana simba usamire kunyangwe iwo oscillations akagadzirwa nemafungu.
Simba rinounganidzwa nemaboys aya rinoendeswa kune jenareta inogadzira magetsi kuburikidza ne hydraulic mashandiro.
Vadivelu Comedy WaveStar Kwete chete anoda kuzadzisa iyo kugadzikana kwemhepo simba kugadzirwa asi zvakare maitiro anomutsa a kufambira mberi kukuru kune yakaoma mamiriro ekunze sekutaura kwandamboita.
Izvi zvinonyanya kubva pa chimiro chengetedzo, zviri yakagadzirirwa anti-dutu system nekudaro kuvimbisa kuchengetedzwa kwemidziyo.
Iyo kambani yakatsaurirwa kuchirongwa ichi akatenga kodzero kubva pazano rehama dzaHensen dzinoshanda sevanopa mazano vachitsigira chirongwa ichi.
Kambani iyi inoratidza kuti, "Simba remasaisai richaita basa rakakosha mukuona simba remangwana, asi michina chete inogona kumira madutu akaomarara ndiyo ichakwanisa kurarama."
Kune rimwe divi, WaveStar haizogare pano chete asi inovavarira kuisa hwaro hwe mapaki esimba echokwadi uye nekudaro tora mukana wezviwanikwa zvakasiyana zvesimba rinowanikwazve
Laurent Marquis, technical Manager anoti, "Inogona kunge iri mhepo nemafungu, asiwo simba rezuva… ", uye inoona chinangwa chehurongwa mu" kuvaka kwemapaki ekutanga umo masisitimu ekutora simba kubva mugungwa ari akakomberedza turbine dzemhepo. Kana mafungu nemhepo zvikaungana, munhu wese anokunda ”.
WaveStar ikozvino urikuvaka zvakare sisitimu yekusimudzira uye uchiwedzera huwandu hwemafloats / maboys mushure memakore kuyera mhedzisiro yesarudzo yekuwedzera kubatwa kwesimba simba.
Saizvozvo, kambani yakabvunza iyo European Union rutsigiro rwako kuburikidza nechirongwa Horizon 2020 nechinangwa chekuvaka yekutanga-yakakura-prototype.
Nechinangwa chimwe chete, mubatanidzwa wakagadzwa umo iyo Universidad de Cantabria pakati pemamwe masangano.
"Isu takagadzirira kuvaka hurongwa hukuru," anodaro Marquis, anoona huwandu hwesimba rezvinhu zvakasiyana zvesimba rinogadzikana semhinduro yesimba remangwana. “Tinofanirwa kudzidza kubva kune mumwe nemumwe. "Panzvimbo pekukwikwidza, tinofanira kunge tiri pamwe chete tichivaka pfungwa itsva inovimbisa ramangwana."
Kuti upedze ndinokusiira pfupi pfupi vhidhiyo, angaita masekondi makumi mana, kwavanotsanangura nenzira yakapfupika mashandiro acho (muChirungu) panguva imwechete kuti iwe ugone kucherechedza maboyoy nemidziyo yeWaveStar.
Kana chirongwa ichi chikaramba chichienderera mberi uye chakavakwa pamwero mukuru chichiwedzera mamwe masimba anomutsidzirwa akadai semhepo uye kunyangwe nezuva, zvinogona kunzi kuwana mamwe magetsi kuchakwanisa, kwete chete neiyi chirongwa asi nemamwe akawanda, kupa muzana huwandu hwevanhu zvakanyanya.
Kubva pano ndinotenda vese avo vanhu vane aya mazano anoshamisa anoita kuti tikwanise kuve neramangwana rakanaka uye kuzvimiririra kubva kumafuta epasi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Renewable simba » Wave Simba » Simba remafungu pasina kukanganiswa neWaveStar
ini pachangu akadaro
Kuona iyo posvo uye kundiyeuchidza kuti muchinda weAsturias ari kuzotemerwa 2 mamirioni euros uye kuti hapana munhu anombofunga nezvekuishandisa sechikuva chesimba, zvinondipa kuti hakuna musoro mune yedu mutemo
chikuva chiri nani chekuyedza magetsi emagetsi (ayo anogona kana asingashande) panenge pasina,
Chii chinonzi aerothermy?
Biogas inogadzirwa kubva kune zvisingaite zvinomera zvinomera